डा. केसीलाई कोरोना संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
डा. केसीलाई कोरोना संक्रमण
कार्तिक २८, २०७७ इकान्तिपुर डेस्क
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । केही लक्षण देखिएपछि डा. केसीको बिहीबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो ।
उनलाई रुघाखोकी लाग्नुका साथै ज्वरोसमेत आएको साेलिडारिटी फर डाक्टर गाेविन्द केसीले जनाएकाे छ । उनकाे श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको छ।
डा केसी अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको गणेशमान सिंह भवनमा भर्ना भएका छन् । उनको थप स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ १९:१९
कार्तिक २८, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — बंगलादेशले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा शुक्रबार नेपाललाई २–० ले हराएको छ । ढाकाको बंगबन्धु रंगशालामा भएको खेलमा बंगलादेशले प्रत्येक हाफमा एक/एक गोल गरे । बंगलादेशले दसौं मिनेटमा सुरुवाती अग्रता लिएको थियो र त्यसमा मोहम्मद नबिब नेवाजले नजिकको दूरीबाट गोल गरे ।
बंगलादेशका तर्फबाट ८० औं मिनेटमा महबुर रहमानले काउन्टर आक्रमणमा बल अगाडि बढाउँदै दोस्रो गोल गरे । नेपालले पूरा खेल अवधिमा सटिक देखिन सक्ने कुनै पनि आक्रमण गर्न सकेन र हार बेहोर्न बाध्य रह्यो । यससँगै दुई खेलका शृंखलामा बंगलादेशल १–० ले अगाडि रह्यो । अब दोस्रो खेल मंसिर २ मंगलबार हुनेछ ।
यस खेलसँगै नेपाली खेलकुदमा औपचारिक रूपमा खेल गतिविधि फेरि सुरु भएको छ । चैतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी पनि सम्पूर्ण खेल गतिविधि पनि रोकिएको थियो र यससँगै पूरा खेल क्षेत्र ठप्प भएको थियो । बंगलोदशका लागि यस खेलसँगै त्यहाँको खेल क्षेत्र पनि ओपचारिक रूपमा मैदानमा फर्केको छ ।
बंगलादेशले दुई खेलको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको प्रस्ताव राखेपछि नेपालले त्यसलाई स्वीकारेको हो । दुई साताभन्दा कम समयको तयारीपछि नेपाल मैदानमा ओर्लेको हो । बंगलादेशले नेपाललाई हराएका भने पाँच वर्षयता पहिलो हो । यसअघि सन् २०१५ को अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि बंगलादेशले नेपाललाई ढाकामै हराएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ १८:५४